Steak curry rosiana, fomba fahandro nentim-paharazana misy fikitika exotic | Recipe ao an-dakozia
Rosiana steak Rosiana
Toñy Torres | | Entries mafana, Starters mangatsiaka
Androany itondrako anao ity karazana steak Rosiana nentim-paharazana, sakafo matsiro miaraka amin'ny fikitika ivelany izay hahafaly na dia ireo felatanana voafantina indrindra aza. Resipeo tsotra nefa matsiro, mora omanina ary afaka manompo na mafana na mangatsiaka. Izay mahatonga ireo steak curry Rosiana ity mahandro tena mahandro sakafo mandritra ny fahavaratra, satria azonao atao ny mitondra azy ireo amin'ny fitsangatsanganana any ambanivohitra, eny amoron-dranomasina, na any amin'ny toerana fialamboly rehetra.
Azonao atao ny manompo ireo steak Rosiana curry ho fanombohana, Na dia manampy salady feno na lovia legioma tsara aza ianao dia hanana safidy mety tsara amin'ny sakafo hariva maivana. Ho fanampin'izay, afaka manamaivana kaloria foana ianao amin'ny fomba fandrahoan-kena, satria na dia efa nomaniko tao anaty lapoaly aza ianao dia afaka mampiasa lafaoro handrahoana steak Rosiana. Mila fotoana bebe kokoa ianao, ao anatin'ny 25 minitra dia efa nomaninao ho vonona izy ireo, hitovy ny fanomanana. Midina any an-dakozia izahay ary Mazotoa homana!
Hena 500 gr
Atody 1 L
Persily voatavo 1 sotro fihinanana
Vovoka tongolo lay sotro fihinanana
Curry an-tsokosoko 2 (raha tianao dia azonao atao ny manampy mihoatra ny kely arakaraka ny tsiro)
Izahay aloha dia handoa ny hena ka mandany ny tsiro rehetra avy amin'ny akora.
Ao anaty kaontenera lehibe iray no ametrahantsika ny hena voatoto, ampio ny atody ary afangaro.
Ankehitriny dia ampianay ny sotro ny persily, ny vovoka tongolo lay, sira mba hanandrana ary ny kari ary afangaro tsara ireo fangaro rehetra.
Sarony fonosana plastika ilay kaontenera dia atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana adiny 1 farafahakeliny.
Aorian'io fotoana io dia ampiana lafarinina trondro 2 na 3 sotro fihinana ary afangaro indray.
Mila mahazo koba homogenezy isika, ka tsy maintsy ampidirintsika tsikelikely ny lafarinina mandra-pahatongantsika ny firafitra tiana.
Manamboatra lapoaly miaraka amin'ny farany ambany izahay ary manampy menaka oliva be dia be.
Ho fanampin'izay, apetrantsika ao anaty lovia lalina ny lafarinina renin-trondro mba handrahoana ny fonosana rosiana.
Miaraka amin'ny sotro fihinanana iray dia maka ampahany kely amin'ny hena izahay ary ny tanantsika no mamolavola azy ho lasa steak Rosiana.
Mandalo moramora ny lafarinina zana-trondro izahay ary endasina amin'ny menaka mafana mandra-paha-vonona ny hena.
Arotsaho amin'ny taratasy mitroka ireo menaka be loatra ary avelao hafanaina alohan'ny hanompoana azy.
Ity lovia ity dia mety ho an'ireo tsy mahazaka gluten, satria na ny hena na ny lafarinina zana-borona dia tsy misy an'io akora io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Starters mangatsiaka » Rosiana steak Rosiana
Elatra akoho misy soja sy tantely